Gold Area general services
09 400 30 20 90,
No 480 A သိမ်ဖြူလမ်း ဖို့မြေရပ်ကွက် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်
Real Life Co., Ltd
အမှတ် ၃၇၊ ပထမထပ်၊ ဗဟိုလမ်း (ခိုင်ရွှေဝါလမ်း)၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
အမှတ် ၁၆ / A1, သာယာကုန်းလမ်း။ အထက်ပုဇွန်တောင်
၀၁-၂၄၅၅၈၅၊ ၀၁-၂၄၆၆၆၃၊ ၀၁-၇၀၆၆၇၇၊ ၀၉-၄၃၁၃၃၉၈၁၊ ၀၉-၂,
တိုက်အမှတ် (၂၇၆)၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ ၃၉ လမ်း(အထက်) ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမှဝင်ပါ။
Phyu Sin Myint Mo Co.Ltd.
No. 1242, Waizayantar Road, 6th Ward, South Okkalapa Township.
Kyal Sin Hein Real Estate
153/906 HlawGar Road.South Dagon TownShip. Yangon
Golden Estate Co,Ltd
THINGAHA REAL ESTATE SERVICE
09- 250909654, 01-551451,09-252807400,09-798299395,09-972532346
No-002, Bldg 33, Ground Floor, Ka Mar Kyi Housing, Ka Mar Kyi Rd, Thaketa Tsp, Yangon.
Living Myanmar Real Estate
09-255737671, 09-255737672, 09-255737673, 09-25573,
အခန်း (၁၀၁)၊ တိုက် (၄)၊ မြေညီထပ်၊ ကျီတော်အိမ်ယာ၊ အထက်ပုစွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ခ (၈) အမှတ်၃၂ ၆၅ လမ်း ချမ်မြသာစည်မြို့နယ် မန္တလေး
Estate Myanmar Enterprise Real Estate Agency & Law
09-421047773, 01-512029, 01-531484,
No.183, Estate Myanmar Building ,Bho Road , Kamaryut Township, Yangon.
+95 (09) 43164723, +95 09 32444610,
No.103, Buildding (B),Pyinnyawaddy Avenue, Yankin Township, Yangon, Myanmar
2/b,bld-No;01,U tun Linn Chan Street,Hledan.Kamaryut Tsp.
Shogun Real Estate Brokerage Company Limited
No.(E-15). Aung San Stadium, Pansondan Road (Upper Block), Mingalar Taung Nyunt, Township, Yangon.
01-512691, 09-31949166, 09-73059683, 09-73136216,
သီရိဂေဟာ၊ အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၄၀၁၊ ၄၀၂)၊ သီရိလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။
Asia City Star Construction co., LTD.
No.59, Room 11, 2nd Floor, Lion King Tower, Bogalay Zay St(Lower Block), Botahtaung Tsp.Ygn.
အမှတ်(၃၆၀)၊စံပြ (၁)လမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်း။
No.180,Ground floor,myat lay nwe street,new aye quarter,Dawbon,yangon.
< 1234567 8910 > Last Useful Links